Uyilo lwegraphic luxanduva lwezinto ezintle zeefilimu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Ezahlukeneyo
Ngaxa lithile ngokuqinisekileyo ukhe wayibona imovie enomlinganiswa omnye okanye nangaphezulu engadlalwa ngabadlali, kunokuba zenziwe ngekhompyuter, kodwa zikhangeleka ziyinyani. Aba bantu baneempawu ezahlukeneyo kwaye bahlukile kuba enyanisweni abekho.
Ukhe wazibuza ngubani osemva kwaba balinganiswa?
1 Abaqulunqi bemizobo kunye nezinto ezifihlakeleyo zehlabathi
2 Uyilo kunye netekhnoloji
Abaqulunqi bemizobo kunye nezinto ezifihlakeleyo zehlabathi
Ngelixa kuyinyani ukuba oopopayi baphethe ukuyenza, abayili bemizobo banxulumene noko kwaye kungenxa yokuba abayili bemizobo bakwilizwe leengcinga. Uyilo lwegraphic ngokubanzi ifuna ukwenza intengiso yoyilo ekhuthaza uluntu ukuba lusondele kuhlobo oluthile, kodwa amaxesha amaninzi ezi ntengiso kufuneka zibe ngaphakathi kwefantasy, njengabalinganiswa bekhompyuter.
Ngapha koko, kuthathelwa ingqalelo ukuba kuyilo lwegraphic, kuhlala kukho intelekelelo, kuphela kuyilo olunokuthi luboniswe kwinqanaba elikhulu okanye elincinci. Nokuba abayili bemizobo unokwenza uyilo olunezinto zokwenyani ezivelisa imvakalelo yefantasy kuye nabani na ozibonayo. Xa umyili wegraphic ebandakanyeke ngokupheleleyo kwimibono, kwaye umbono wakhe uphuphuma kakhulu, emva koko iqala ukuthatha inxaxheba kwiifilimu zoopopayi.
Enye yezi bhanyabhanya, apho ungabona khona inkunkuma yoyilo lwegraphic, ikwi "I-monster iza kuza kundibona."
Ifilimu inomxholo womzobi kwaye nangona kunjalo oopopayi bakholelwa ukuba ngabo abenza aba bantu, inyani kukuba zikhokelela kuphela kwiscreen kunye nokuhamba kuyilo olwenziwe ngumzobi wegraphic.
Imuvi "Irhamncwa liza kundibona" Uthathe inxaxheba ebalaseleyo kuyilo lwegraphic kwaye wayephumelele imbasa yeGoya ngenxa yoko. Iziphumo ezizodwa, nangona kunjalo, zinento yokwenza nazo zonke ubuchule bokumamela etshintsha imbono yelizwe esiphila kulo kwaye ngaphandle kokuthabatha inxaxheba kwabaqambi, kusenokwenzeka ukubona ukuba indalo yezinto ezahlukeneyo ifakiwe njani kwezi ziphumo.
Ukuba ucinga ukuba zii-animators kuphela ezinento yokwenza neziphumo ezizodwa kunye nabalinganiswa abahle, uyaphazama. Ngapha koko, uyilo lwegraphic lufanelekile kangangokuba kude kuthiwe lIziphumo ezizodwa kunye noopopayi zisekwe kuyo. Kungenxa yokuba nangona uyilo lwegraphic luhlala lungenazixhobo zokwenza zonke izinto ezintle kunye nabalinganiswa, kuphela kwayo okwaziyo ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwendalo yokwenza ukuvusa iimvakalelo ezahlukeneyo kunye neengcinga ezikufutshane ibali elibaliswayo.
Uyilo kunye netekhnoloji
Enkosi kuyilo kunye netekhnoloji, abantu ngoku bayakwazi ukudibanisa inyani kunye neentsomi okanye ukutshintsha inyani kunye nokwenza into emangalisayo. Ngokusisiseko, ngaphandle koyilo lwegraphic ngekhe kwenzeke ukwenza izinto ezimnandi, kunye noyilo oluvelisa iimvakalelo eluntwini olonwabisayo kwaye ngaphandle kwetekhnoloji ayizukukwazi ukuyizalisekisa.
Uyilo lwegraphic kufuneka wenze uphando olucokisekileyo nkqu nakwinkalo ezininzi zobomi, kuba intsomi isekwe kwinto yokwenyani. Umzekelo, ukwenza izilwanyana kumdlalo bhanyabhanya "Incwadi yehlathi”, Ikhutshwe kutshanje kwimidlalo yeqonga, kuye kwafuneka ukuba abayili bayo bafunde izilwanyana ezihlala ehlathini ngokubanzi, bongeze ubumnandi obenze ibali labantwana elimangalisayo libe nakho.
Ngokukwanjalo abaqulunqi be "Jurassic World" kwafuneka benze uphando ngeedinosaurs ezahlukeneyo besebenzisa amaxwebhu amandulo kunye nokwakhiwa ngokutsha kweefosili, ukuzisondeza kufutshane nenyani.
Ezinye zeedinosaurs kwimovie zenziwe zemfuza kwiilebhu zeJurassic Park, ke kwafuneka bongeze iimpawu zezinye izilwanyana kwezi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyilo lwegraphic luphethe izinto ezintle kumdlalo bhanyabhanya
UJuan | ii icon ezikhululekileyo sitsho
Abaqulunqi bemizobo bahlala bephakathi komculi kunye nomlawuli wezobugcisa. Siyazi ngokwaneleyo malunga ne-aesthetics ikakhulu ebhekisa kubugcisa obuhle (isayikholoji yombala, ubuchwephesha, imifanekiso, njl.njl.) Ukuba yincutshe. Kodwa siyazi ngokwaneleyo malunga nentengiso (indalo yentengiso, uphawu, njl.njl.) Ukuze ezi projekthi zifaneleke.
Ayisiyomfihlo ukuba aboyilo abaphambili bemifanekiso bhanyabhanya abalishumi abaphezulu baseHollywood kwaye ngokuyinxalenye basebenza njengabanini beekhontrakthi kweli niche cinema niche.
Phendula uJuan | ii icon ezikhululekileyo